तथ्य र अनुभूति - साप्ताहिक
तथ्य र अनुभूति
प्रेम गरियो, प्रेम हेरियो । प्रेमका विषयमा लेखिएका दर्जनौं पुस्तक पढियो । सयौंसँग प्रेमकै विषयमा लामा-लामा बहस गर्दै अन्तर्वार्ता पनि लिइयो । प्रेम के हो भन्ने विषयमा कपाल कन्याउँदा-कन्याउँदा, कपाल नै झर्‍यो, सोच्दा-सोच्दा कपाल नै फुल्यो । तब थाहा भो, कुरा त सारै सिम्पल पो रै'छ । प्रेम जम्मा-जम्मी तीन किसिमका हुँदा रहेछन् ।
पहिलो तर उत्कृष्ट प्रेम । यो प्रेममा केटालाई केटी मनपर्छिन्, केटीलाई केटा मनपर्छ । बिना कुनै कारण मनपर्छ तर परिस्थिति यति गाह्रो हुन्छ, जसको मिलनको कल्पना गर्दा पनि रौं ठाडो हुन्छ । यो प्रेम अप्ठ्यारो ठाउँमा आएको तर पाक्न बाँकी रहेको पिलो जस्तै हुन्छ, न त देखाउन मिल्न, न त निचोर्न नै । हामीले पढ्ने गरेका लैला-मञ्नु, हिर-राञ्झा, राजकुमारी र तबेलाको केटाका प्रेम कथाहरू यस्तै प्रेम हुन् । यो प्रेममा एक पटकको हेराइ, एकपटकको स्पर्श, एकपटकको चुम्बन नै जीवन बिताउन पुग्ने ऊर्जादायक हुन्छ । हो, पहिलो कोटीको प्रेम त्यो हो, जसमा दुवैबीच प्रेम त हुन्छ तर परिस्थिति यस्तो हुन्छ कि दुवै चाहेर पनि मिल्न सक्दैनन् वा समाजले मिल्न दिँदैन । कतिपयले जीवन त्याग गर्छन्, कतिले आफ्नो प्रेमलाई खोकिलामा च्यापेर जीवन पर्यन्त त्यसलाई जीवन जिउने आधार बनाउँछन् ।
दोस्रो, मध्यम प्रेम । यो प्रेममा केटालाई केटी मनपर्छिन्, केटीलाई केटा मनपर्छ । बिना कुनै कारण मनपर्छ । (अँ धनको आकर्षण, रुपको आकर्षण यी दुवै प्रेममा हुँदैन) यो प्रेममा मिलन सजिलो त हुँदैन तर प्राप्तिका लागि धेरै संघर्ष गर्नुपर्छ । उनीहरू पहिले आफ्नो प्रेमलाई परिपक्व बनाउँछन् । त्यसलाई जीवनभर तान्ने इन्धन (करियर, समाजसँग संघर्ष गर्ने क्षमता र आफूलाई सहयोग गर्ने जमात) तयार गर्छन् । घर-परिवारलाई मनाउने प्रयास गर्छन् । ठाउँ-ठाउँमा उनीहरू संघर्ष गर्छन् र अन्तत: भागेर वा मागेर विवाह गर्छन् । यो प्रेममा, प्रेमभएको दिनदेखि विवाहको दिनसम्म वा परिवारले स्वीकार नगरेसम्म संघर्ष नै संघर्ष हुन्छ ।
हामीले हेर्ने अधिकांश चलचित्र, साहित्य एवं अमर गाथाहरूमा यस्तो प्रेमको चर्चा पाइन्छ । धेरैलाई यो पहिलो कोटीको प्रेम लाग्न सक्छ । तर यो प्रेम मध्यम प्रेम नै हो, कारण विवाह अघि यो प्रेममा जति तडप, जति बैचैनी र जति समर्पण हुन्छ, विवाहपछि घट्दै-घट्दै जान्छ । केही वर्षपछि उनीहरूले आफूहरूबीच त्यस्तो प्रेम थियो भन्ने कुरा बिर्संदै जान्छन् । उनीहरूको प्रेम देखेर निर्देशकले चलचित्र बनाउँछन्, साहित्यकारले उपन्यास लेख्छन् अनी उनीहरू आफ्नो कथामा बनेको चलचित्र हेरेर अपसोच गर्छन् ।
तेस्रो तर निम्नकोटीको प्रेम त्यो हो, जसमा एकोहोरो प्रेम हुन्छ । बिना कुनै कारण राम्रो लाग्छ, बिना कुनै कारण प्रेम हुन्छ र बिना कुनै कारण उसको देब्रेतर्फको छातीमा घाउ हुन्छ । यसमा पहिलो कोटीको प्रेम जस्तै एक पटकको हेराइ, एकपटकको छुवाइ नै जीवनभरिका लागि ऊर्जादायक हुन्छ । रातको निन्द्रा हराम हुन्छ, दिनको चैन खराब हुन्छ । अनि दोस्रो कोटीको प्रेम जस्तै उनलाई पाउन दिनरात प्रयास गर्छ, संघर्ष गर्छ । यद्यपि जसरी एकहातले ताली बज्दैन, बिनाकागज कलमले लेख्न सक्दैन, बिनासिम मोबाइलको अर्थ हुँदैन, ठीक त्यस्तै त्यो एकोहोरो बाँसुरी लामो समय बज्न सक्दैन । त्यस्ता प्रेमी वा प्रेमीकाले आफ्नो प्रेम महान हो भनेर जतिसुकै कराउन, त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन । यही कारण विज्ञहरूले यो प्रेममा जतिसुकै तडप होस्, यसलाई तेस्रो कोटीको प्रेममा राखेका छन् ।
यो तहको प्रेमका बारेमा पनि सिनेमा बनेका छन्, कथा लेखिएका छन्, तर जति आकर्षण पहिलो र दोस्रो श्रेणीले आकर्षण गर्छन्, यो श्रेणीको प्रेमले मानिसको ध्यान तान्न सक्दैन ।
विश्वकप क्रिकेटमा नेपालका खेल हेर्दा कस्तो अनुभूति भयो?
यस्तै अनुभूति महिलाले पुरुषलाई देख्दा हुन्छ कि हुँदैन?
चिसो मौसममा न्यानो अनुभूति
भूकम्पको ग्ल्यामर आश्विन ६, २०७२
भूकम्पको समाजशास्त्र २ श्रावण १५, २०७२
भूकम्पको समाजशास्त्र ! जेष्ठ ३२, २०७२
एकतर्फी प्रेमको कथा चैत्र ६, २०७१
चर्चित हुने काइदा फाल्गुन २९, २०७१
ताजमहल भ्रम फाल्गुन ८, २०७१
मित्रताको सीमा माघ १६, २०७१
१२ वर्षपछि माघ २, २०७१
प्रेमका तीन आयाम पुस २५, २०७१
प्रेमको परीक्षण पुस १८, २०७१